ထူးခြားလှပသောအသွင်အပြင်များအဖြစ် မြင်ရမည့် မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှု လက္ခဏာ(၁၀)ချက် - ONE DAILY MEDIA
ထူးခြားလှပသောအသွင်အပြင်များအဖြစ် မြင်ရမည့် မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှု လက္ခဏာ(၁၀)ချက်
မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများဟာ အလွန်ရှုပ်ထွေးသလို တခါတရံမှာတော့ ထူးခြားမှုများကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုများကြောင့် အချို့လူများ၏ သွင်ပြင်ကိုပိုမိုထူးခြားစေမှုများလဲ မြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ မျိုးရိုးဗီဇကွဲလွဲမှုများကြောင့်ပင် အမြင်ဆန်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသည့် ထူးခြားဓာတ်ပုံ (၁၁) ပုံကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
11. Vitiligo Vitiligo
ဆိုတာကတော့ အရေပြား၊ဆံပင်နှင့်လက်သည်းခွံများအရောင်လွင့်ပြယ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုသနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း အရောင်ပြယ်မှုနှေးကွေးအောင်တော့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပုံပါအတိုင်း အရေပြားပေါ်တွင် အဖြူရောင်အကွက်လေးများ ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ သူမသွင်ပြင်အပေါ် ဂုဏ်ယူလျက်ရှ်ိပြီး အားလုံးကလဲ လှပတယ်လို့တစ်ညီတစ်ညာတည်း မှတ်ပြုကြပါတယ်။
Vitilgo အတွက် အထင်ရှားဆုံး ဥပမာကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပေါ့ပ်အဆိုတော် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ 100% အရေပြားအရောင်လွင့်ပြယ်မှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
မည်မျှပင်ထူးဆန်းနေစေကာမူ ထပ်တူကျလွန်း‌နေတဲ့အမွှာညီအစ်မများသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖော်ပြပါ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှူမျိုးကတော့ အလွန်ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။သူတိူ့နှစ်ဦးကို ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ခံစားချက်ကို မြင်ယောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
Piebaldism Piebaldism ဟာ Melanocytes လို့ခေါ်တဲ့ ဆဲလ်ချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်ရတာဖြစ်ပြီး အလွန်ရှားပါးပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ နဖူးနေရာမှာအဖြူရောင်အကွက် ဖြစ်ပေါ်နေပြီ ဆံပင်ထိပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြူနေလေ့ရှိပါတယ်။
စိတ်ကူးယဥ်ပုံပြင်ထဲမှ ပေါ်ထွက်လာသည့်အလား အမြင်ဆန်းသစ်ပြီး အံ့ဩဖွယ်သွင်ပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Albinism Albinism ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူသိများထင်ရှားပြီးသား Syndrome တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Albinism သမားများဟာ အမြင်ဆန်းနေစေသည်သာမက အမြင်အာရုံနှင့် အကြားအာရုံများ ချို့တဲ့နေမှုကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။အာဖရိကတိုက် ကဲ့သို့သော အချို့နေရာများတွင်တော့ Albinos များ ဟာအသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းများပါရှိ‌နေပါတယ် ။အကြောင်းကတော့ သူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများအား ကံ‌ကောင်းခြင်း ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတို့အတွက် စုန်းအတတ်ပညာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြာရောင်မျက်လုံး ၊ အကြားအားရုံချို့တဲ့မှု တို့နှင့်အတူ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ Waardenburg syndrome ခံစားရသူတိုင်းကတော့ ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ရုပ်သွင်ပြင်ရှိသူချည်း မဟုတ်သော်ငြားလည်း ထူးခြားတဲ့မျိုးရိုးဗီဇ ပုံမမှန်မှုများထဲတွင်တော့ တစ်မျိုးအပါအဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။
6. Distichiasis” or double eyelashes Elizabeth Taylor
Distichiasis” or double eyelashes Elizabeth Taylorကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံးသော မျက်တောင်နှစ်ထပ် ပါသူ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့ရုပ်ရည်ကို ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး ဒီလိုမျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှုကိုတော့ “Distichiasis” လို့အမည်တွင်ပါတယ်။
လူနည်းစုမှာသာ တွေ့iridum or multiple colors in eye သင့်မိသားစု ‌အပေါင်းအသင်းများကြားမှာ မျက်ဝန်းအရောင်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးရှိပါက ထိုသူကို ” Heterochromia iridum ” လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
မျက်ဝန်းတစ်လျှောက်မှာ အရောင်မျိုးစုံကို တွေ့မြင်ရနိုင်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ မူမမှန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် အပြာရောင်နှင့်အညိုရောင် တစ်ဖက်စီကွဲပြားသော မျက်လုံးပိုင်ရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် မည်မျှအမြင်ဆန်းသစ်နေမည်ကို တွေးကြည့်စေလိုပါတယ်။
4. Gigantism Gigantism
Gigantism Gigantismကတော့ အဖြစ်များပြီး လှပသော မျိူးရိုးဗီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သလို အချို့သော ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများတွင်မူ အသက်တိုခြင်းကို တွေ့ရှိရနိုင်ပါတယ်။ Gigantism ရောဂါခံစားခဲ့ရသူ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ Elisany da Cruz Silva ဆိုသူအမျိုးသမီးဟာ Pituitary Gland အကျိတ်ရောဂါနှင့်အတူ အရပ်ဟာလည်း ၆ပေ၉လက်မ ထိရှည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အခုအခါမှာတော့ သူမဟာ အကြိတ်ကို အချိန်မှီ ခွဲထုတ်ကာ ဖွံထွားမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပြီး မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးနေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးစေ့နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းဟာ သန္ဓေသားအရွယ်ကတည်းကပင် မေးရိုးနှစ်ခုပေါင်းစည်းရာမှာ ချို့ယွင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဖိုးအဖွား ၊ မိဘ များ‌‌တွင် မတူညီသောလူမျိုးကွဲနှစ်ခုပေါင်းစပ်ရာမှ မှဆင်းသက်လာသော MC1R ‌ဟုခေါ်သည့် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုကြောင့် သားသမီး ၊ မြေး များတွင် ခရမ်းရောင် (သို့) အနီရောင်ဆံပင် ၊ အပြာရောင်မျက်လုံး များကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဩ‌စတြေးလျလူမျိုးများဟာ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး အဆိုပါ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရှားပါးသောမျိုးရိုးဗီဇမူမမှန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးတွင်သာ ထူးခြားမှုဖြစ်စေပြီး မျက်ဝန်းအတွင်းမှ အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းကို ပျောက်ပျက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရောင်မျက်ဝန်းရှိသည့် မိဘများထံမှ အပြာရောင်(သို့) အစိမ်းရောင်ရှိသော သားသမီးများ မွေးဖွားလာလေ့ရှိပါတယ်။ သင့်အသိထဲမှာလဲ အထက်ဖော်ပြပါ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု လက္ခဏာများကို မြင်ဖူးတယ်ဆိုပါက comment မှာရေးပေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်။
အမေဆိုတာရှိသေးရင် အချိန်မရလည်း ၅ မိနစ်စာလေးမို့ ဝင်ဖတ်သွားစေချင်